RASMI: Maamulka Premier League Oo War Saxaafadeed Buuxa Ka Soo Saaray Shirkii Iyo Codbixintii 20-ka Kooxood Ee Premier League. - Gool24.Net
RASMI: Maamulka Premier League Oo War Saxaafadeed Buuxa Ka Soo Saaray Shirkii Iyo Codbixintii 20-ka Kooxood Ee Premier League.
Maamulka Premier League ayaa sidii laga filayay soo saaray war saxaafadeed rasmi ah kadib kulankii xaasaasiga ahaa ee maanta dhex maray 20 ka kooxood ee Premier League.
Waxaana warka rasmiga ah ee maamulka Premeir league soo saaray lagu xaqiijiyay codbixintii ay dhamaan kooxaha 20ka ahi isku raaceen in barri si rasmi ah loogu soo laabto tababarkii kooxaha Premier League.
Warkan uu soo saaray maamulka Premier league ayaa sidoo kale lagu daabacay baraha bulshada iyo warbaahinta kooxaha Premier league gaarka u leeyihiin si loo cadeeyo in uu yahay war dhamaan kooxaha iyo maamulka Premier league ay isku raacsan yihiin.
War saxaafadeedka uu maamulka Premeir League soo saaray ayaa sidan u dhignaa:
“Saamilayda prermier league waxay maanta si aan kala hadh lahayn ugu codeeyeen in barri galinka danbe lagu soo laabto tababarka groupyada yar yar ah waana talaabadii ugu horaysayee dib u bilaabashada Premier League marka uu badqabku saamaxo in la sameeyo”.
“Talaabada kowaad ee hanaanka soo laabashada tababarku waxay kooxaha awood u siinaysaa in ay tababartaan iyaga oo ilaalinaya kala fogaanshaha bulsho. Tababarka jidh ahaan layskula xidhiidhayo wali lama ogolaan”.
“Heerkan kowaad waxaa laysku raacay kadib markii lala tashada ciyaartoyda, tababarayaasha, dhakhaatiirta kooxaha Premeir League, khabiiro madax banaan iyo dawlada”.
“Hanaan caafimaad oo xadidan oo ah heerka ugu sareeya ayaa lagu hubin doonaa qof kasta oo tababarka ku soo laabanaya ee deegaanka ugu badqabsan ee ugu suurtogalsan”.
“Caafimaad qabka iyo wanaaga dhamaan ka soo qayb galayaashu waa muhiimada ugu saraysa ee premeir League, isla markaana soo laabashada tababarku waxay noqon doontaa hanaan talaabo-talaabo ah”.
“Hadda waxaa sii socon doona wada tashiga buuxa ee lala yeelanayo ciyaartoyda, tababarayaasha, kooxaha, PFA (ururka ciyaartoyda) iyo LMA (ururka tababarayaasha) maadaama oo la samaynayo hanaanka caafimaad ee dhamaystiran ee tababarka jidh ahaan laysku taaban karo”.
Waxay hadda kooxaha Premeir League iyo maamulkooda kubbada cagtu isku raaceen in barri galinka danbe ay noqon doonto maalintii ugu horaysay ee ay dhamaan kooxuhu ku soo laaban doonaan tababarka iyada oo la raacayo tilmaamaha in ayna ciyaartoydu istaaban oo ay kala fogaadaan.
Waxaa hadda meesha ka baxday kala qaybsanaantii 20 ka kooxood ee Premier League waxayna barri noqon doontaa maalin muhiim u ah dib u bilaabashada xili ciyaareedka premier League iyada oo kulan kale oo noocan ah ay kooxuhu ku qaadan doonaan tilmaamaha caafimaad ee dhamayska tirsan ee la raaxi doono.